Afaka mampita ny tetikasako amin'ny aterineto ve aho mba hahita fahombiazana amin'ny fikarohanam-pikarohana fikarohana ho an'ny extension extension domain name UK?
Amin'izao fotoana izao, misy hevitra manan-danja ao amin'ny Internet momba ny mety ho hery goavana amin'ny dot UK extension. Ny tena marina, tarihin'ny sariohatra fitadiavana fikarohana ao UK mifototra amin'ny aterineto manomboka amin'ny aterineto dia heverina ho lamaody farany sy fitafy tsara indrindra. Eny, ny ankamaroan'ny tsirairay dia naheno fikambanana maro sy marika maromaro voafaritra ary namaritra ny fahombiazany tamin'ny anaran'ny sehatra manokana.
Eny ary, tokony hanaiky izany isika - Ny famolavolana tetikady ara-barotra no zavatra voalohany tokony hatao mandritra ny vanim-potoana fanombohan'ny sehatry ny fandraharahana an-tserasera. Ary ny fisafidianana ny anaran'ny anaran'ny anaran'ny sehatra mahazatra dia fitaratry ny drafitra ara-barotra rehetra - ?????? ???????? ?? q10. Amin'izany fomba izany, ny fandehanana any amin'ny sehatra UK ao amin'ny UK, ohatra, dia mety ho fanapahan-kevitra fototra amin'ny raharaham-barotra manontolo, tsy hoe manangana ny aterineto ao amin'ny Internet fotsiny, fa mametraka ny teboka fanombohana ny fahombiazan'ilay marika, ary manome hazavana maitso ho an'ny olona miaina bebe kokoa amin'ny fisintonana rakitsoratra mitondra mankany amin'ny tranonkalanao.
Azonao atao koa ny manontany ahy fanontaniana mahalalahana - na izany aza, maninona no tsy manangona ny doka malaza indrindra momba ny COM COM? Tsotra ny zava-drehetra, satria ny toerana misy ny dot COM dia lasa toerana feno loatra ho an'ny hetsika feno. Ary koa, tadidio fa ny fananana fikarohana ara-tsimiao tsara araka ny teboka UK dia mety ho lasa fomba tsara hanaovana orinasa eo an-toerana amin'ny fotoana iray. Raha ny marina, izaho dia hiresaka momba ny fikarohana farany nataon'i Nominet, ny orinasa mpamorona miandraikitra ny anaran'ny sehatra UK sy tompon'andraikitra amin'ny sehatra an-tserasera ao anatin'ny tontolon'ny aterineto eran-tany. Noho izany, misy ny zava-misy sy fanazavana fanampiny novelabelarin'ny isa maromaro statistika, raha jerena ny fanatsarana ny milina fikarohana amin'ny alàlan'ny fampitàna ny anaran'ny sehatra UK:
Raha oharina amin'ireo tranonkala hafa, ireo pejy farany. Ny UK dia matetika mahazo fitokisana sy fahefana eo amin'ny mpampiasa;
Dot UK extension name has many name options options for you to choose from, when your business is brought into action on the level of space (that means you can be absolutely free to pick some of the most Tombontsoa malaza toy ny co. uk, org. uk, izaho. uk na ampiasao izy ireo aorian'izay raha tianao indrindra, ohatra ny hampiantrano ny tranonkalanao vaovao mandritra ny fotoana maharitra);
Anaram-ponina anaran'olona iray. UK dia manome ny tranokalan'ny fikambanana, manohana ny orinasa iray, na mametraka ny lisitra manokana - ny iray amin'izy ireo dia nahatsikaritra indray mandeha indray mandeha isaky ny 5 segondra monja;
Ary tonga eto ny ampahany tena vaovao tsara ho an'ireo mpandraharaha an-tserasera mitantana ny orinasa amin'ny Internet, ary miasa manokana amin'ny fivarotana vokatra na serivisy. Araka ny fanadihadiana natao vao haingana nataon'i Nominet, maherin'ny 70% amin'ny fividianana olon-dehibe ao an-toerana no mamakivaky ny fanitarana ny anaran'ny sehatra UK.